Report: 66(d): No real change — ၆၆(ဃ): စစ်မှန်သည့် ပြောင်းလဲခြင်းမရှိ – Free Expression Myanmar
Dec 11, 2017 by Coordinator	in News သတင်း
Over the past two years, Article 66(d) has been the tool of choice for those in positions of power who want to punish those who are trying to hold them accountable. The government's amendment of 66(d) in August 2017 has had no discernible impact on this.
FEM's expectation is that this evidence will be used byarange of stakeholders in civil society and in government to continue the process of reforming the Telecommunications Law and repealing 66(d).
Repeal Article 66(d) of the Telecommunications Law.
Amend the other problematic articles in the Telecommunications Law, namely Articles 4, 5-8, 18, 40, 68(a) and 75-77.
Amend other problematic laws restricting legitimate online expression, including Articles 33-34 of the Electronic Transactions Law.
Amend the Penal Code to decriminalise defamation. Adoptacivil defamation law instead that includes: public officials must tolerate greater criticism, public bodies including the military cannot be defamed, and all defences in international standards.
Adoptalaw or amend current laws to makeaframework for testing the authenticity, reliability, and admissibility of electronic evidence.
Adoptalaw on gender-based violence.
Carry out reviews of all laws and bills to assess whether they are necessary and whether they duplicate or conflict with other laws. In particular, ensure that all criminal provisions are in the Penal Code, rather than other laws.
Carry out effective multi-stakeholder consultations for each new law or amendment.
Impress on judges, through internal guidelines and training, the importance of judicial independence, including the balanced treatment of expert testimony.
Issue internal judicial guidelines for testing the authenticity, reliability, and admissibility of electronic evidence.
Train judges on international standards relating to freedom of expression and electronic evidence.
Stop making complaints under 66(d) for criticism of your conduct, or your character in doing that conduct. Issue internal guidance saying this.
Use the evidence in this report to push for full repeal of 66(d).
Monitor complaints made under 66(d) and when journalists are defendants, make public statements and give defence lawyers expert testimony on defining defamation and unflattering opinion.
Stop making complaints under 66(d). Using the law reinforces, justifies and legitimises it.
Train editors and journalists on laws and legal principles relating to the limitation of freedom of expression such as defamation.
Examine complaints under 66(d) to ensure that articles and stories properly identify whether cases could potentially be defamation or just intolerance of unflattering opinion.
Support programmes advocating for full repeal of 66(d).
Support programmes to train public officials (including MPs) and the general public (through education curriculum and public information campaigns) in digital literacy and tolerance of diversity.
66d No Real Change -- ၆၆(ဃ): စစ်မှန်သည့် ပြောင်းလဲခြင်းမရှိ
ပြီးခဲ့သော နှစ်နှစ်ကာလအတွင်း အာဏာရှိသူတို့သည် ၎င်းတို့၏လုပ်ရပ်အပေါ် ဝေဖန်မေးခွန်းထုတ်သူ များအား ပုဒ်မ ၆၆(ဃ)ကို လက်နက်သဖွယ် ရွေးချယ်အသုံးပြု၍ အပြစ်ပေးခဲ့ပါသည်။ အစိုးရ၏ ၂၀၁၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လက ပုဒ်မ ၆၆(ဃ) ပြင်ဆင်ချက်သည် သိသာထင်ရှားသော ထိရောက်မှု မရှိခဲ့ပါ။
ဤအစီရင်ခံစာတွင် အဘယ်ကြောင့် ပုဒ်မ ၆၆(ဃ)သည် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကို ချိုးဖောက်နေ ကြောင်းကို ရှင်းလင်းထားပြီး တရားဝင်ဆွေးနွေးငြင်းခုန်မှုကို ဖြတ်တောက်တားဆီးရန် ပုဒ်မ ၆၆(ဃ)ကို အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားသည့်အထောက်အထားများကို ကောက်ယူဖော်ပြထားပါသည်။ အဓိက ရှာဖွေတွေ့ရှိများတွင် အောက်ပါအချက်များ ပါဝင်ပါသည် -
ပုဒ်မ ၆၆(ဃ) အမှု အများစုသည် အာဏာရှိသူများက ၎င်းတို့အပေါ် ဝေဖန်သူများကို တိုင်တန်းထား ခြင်း ဖြစ်သည်။
အချက်အလက်နှင့်အခိုင်မာပြောခြင်းမရှိသည့်အတွက် အသရေဖျက်မှု မမြောက်နိုင်သောထုတ်ဖော် အတွေးအမြင်သဘောဆောင်သည့် ပြောဆိုချက်များပေါ်တွင် ပုဒ်မ ၆၆(ဃ)အမှု အများစုသည် အခြေခံထားသည်။ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်အများစုသည် ချီးကျူးမြှောက်ပင့်မထားသော အမြင်များ ဖြစ်သည်။ အသရေဖျက်မှုမြောက်နိုင်သော အမှုများအတွက်မူ တရားရုံးများက ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပါ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် ခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်များကို အသုံးပြုခြင်းမရှိပါ။
ပုဒ်မ ၆၆(ဃ) မှ အချက် (၃) ချက်ကို ဖယ်ရှားလိုက်သည့် ၂၀၁၇ ခုနှစ် သြဂုတ် ဥပဒေပြင်ဆင်ချက်နောက်ပိုင်းတွင်လည်း ၆၆(ဃ)ဖြင့် အမှုများ တိုင်ကြားနေဆဲ ဖြစ်သည်။ ပယ်ဖျက်ခဲ့ သော အချက်သုံးချက်သည် မည့်သည့်အခါကမှ တိုင်ကြားရာတွင် အသုံးပြုခြင်းမရှိသော အချက် များဖြစ်သည့်အတွက် ဥပဒေပြင်ဆင်ချက်သည် ၆၆(ဃ)၏ မြင်ကွင်းအပေါ် သိသိသာသာ ထိရောက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
တိုင်ကြားခံရသူသည် အမြဲတစေ ပြစ်မှုထင်ရှားပြီး အပြစ်ဒဏ်မှာ ပြစ်မှုနှင့်မမျှလောက်အောင် ပြင်းထန်သည်။ တရားခွင်တိုင်းတွင် ထောင်ဒဏ်သာ ချမှတ်ပြီး ငွေဒဏ်ချမှတ်ခြင်း လုံးဝမရှိသေးပါ။
သေးငယ်သော၊ စစ်ဆေးခြင်းမရှိသော၊ မခိုင်မာသော သက်သေအထောက်အထားများကို အခြေခံ၍ ပြစ်မှုထင်ရှားကြောင်း ဆုံးဖြတ်သည်။ ကံဆိုးသည်မှာ ထိုအချက်ကို တရားရုံးများက သတိထားမိခြင်း (သို့) အကောင်းဘက်သို့ ပြောင်းလဲလာစေရန် ကြိုးပမ်းခြင်းရှိ မရှိဆိုသည်ကို မရှင်းလင်းချေ။
အွန်လိုင်းပေါ်မှ လိင်အခြေပြု အကြမ်းဖက်မှု ကြုံတွေ့နေရသော အမျိုးသမီးများကဲ့သို့ အမှန်တကယ် စစ်မှန်သည့်တိုင်စရာ ကိစ္စရပ်များရှိသော သူများသည် အခြားအားကိုးစရာဥပဒေ မရှိသည့်အတွက် ဤမသင့်တော်သော ဥပဒေကို မလွှဲသာမရှောင်သာ အသုံးပြုနေရသည်။
အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးရပိုင်းမှ တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် ဤအထောက်အထားကို ဆက်သွယ် ရေးဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးနှင့် ပုဒ်မ ၆၆(ဃ) ရုပ်သိမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြု မည်ဟု FEM အနေဖြင့် မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၆(ဃ)ကို ရုပ်သိမ်းသင့်ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပါ အခြား ပြဿနာရှိသော ပုဒ်မ ၄၊ ၅ မှ ၈၊ ၁၈၊ ၄၀၊ ၆၆၊ ၆၈ နှင့် ရ၅ မှ ရ၇ တို့ကို ပြင်ဆင်သင့်ပါသည်။
အီလက်ထရွန်နစ် ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၃- ၃၄ အပါအဝင် အွန်လိုင်းပေါ်ရှိ စစ်မှန်သည့် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ရေးသား ပြောဆိုမှု များကို ထိန်းချုပ်နေသည့် အခြားသော ပြဿနာရှိသည့် ဥပဒေများကိုပါ ပြင်ဆင်သင့်သည်။
အသရေဖျက်မှုကို ရာဇဝတ်မှုမှ လျှော့ချရန် ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သင့်သည်။ ယင်းအစား ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများမှ ပိုမိုကြီးမားသည့် ဝေဖန်မှုများကို သည်းခံရမည်၊ စစ်တပ်အပါအဝင် ပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်းများ တွင် အသရေဖျက်ခံရခြင်း မရှိနိုင်ပါ စသည့်အချက်များနှင့် နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများပါ အကာအကွယ်အားလုံးပါဝင်သော အသရေဖျက်ခြင်း တရားမမှုဥပဒေကို ပြဌာန်းသင့်ပါသည်။
အီလက်ထရွန်နစ် အထောက်အထား၏ စစ်မှန်မှု၊ ခိုင်မာမှုနှင့် လက်ခံနိုင်မှုတို့ကို စစ်ဆေးရန် မူဘောင်တစ်ခု ချမှတ်ရေးအတွက် ဥပဒေတစ်ရပ် ပြဋ္ဌာန်းသင့် (သို့မဟုတ်) လက်ရှိ ဥပဒေများကို ပြင်ဆင် သင့်ပါသည်။
ကျားမကွဲပြားမှုအခြေပြု အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဥပဒေတစ်ရပ် ပြဋ္ဌာန်းသင့်ပါသည်။
ဥပဒေနှင့် ဥပဒေကြမ်းများ အမှန်တကယ် လိုအပ်မှုရှိမရှိနှင့် ဥပဒေအချင်းချင်း ဆင်တူနေခြင်း (သို့) ဥပဒေချင်း ပဋိပက္ခဖြစ်မဖြစ် အကဲဖြတ်စစ်ဆေးရန် ဥပဒေနှင့် ဥပဒေကြမ်း အားလုံးကို ပြန်လည် သုံး သပ်သင့်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ပြစ်မှုဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်များအားလုံး အခြားဥပဒေများတွင် မဖော် ပြဘဲ ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေ၌သာ ပြဋ္ဌာန်းဖော်ပြသင့်ပါသည်။
ဥပဒေသစ်တစ်ခုချင်းစီ (သို့) ပြင်ဆင်ချက်တစ်ခုချင်းစီအတွက် တာဝန်ရှိသူ stakeholder အများအပြား ပါဝင်သည့် ထိရောက်သော တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများ လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။
ဌာနတွင်းလမ်းညွှန်ချက်များနှင့် သင်တန်းများ၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏ အချိုးကျမျှတသော သက်သေထွက်ဆိုချက်အမြင် အပါအဝင် တရား စီရင်ရာတွင် အမှီအခိုကင်းမှု၏ အရေးပါပုံတို့မှ တဆင့် တရားသူကြီးများကို အရည်အသွေး မြှင့်တင်သင့်ပါသည်။
အီလက်ထရွန်နစ် အထောက်အထား၏ စစ်မှန်မှု၊ ခိုင်မာမှုနှင့် လက်ခံနိုင်မှုကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးရန် အတွက် တရားစီရင်ဆိုင်ရေး ဌာနတွင်း လမ်းညွှန်ချက်များ ထုတ်ပြန်ထားသင့်ပါသည်။
လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နှင့် အီလက်ထရွန်းနစ် အထောက်အထားတို့နှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများအတိုင်း တရားသူကြီးများကို သင်တန်းပို့ချသင့်ပါသည်။
သင့်လျော်သည့် အပြစ်ဒဏ်များ ချမှတ်ရေးအတွက် ဌာနတွင်း လမ်းညွှန်များ ရေးဆွဲပြုစုရန် ရည် မှန်းချက်ဖြင့် ပြစ်မှုစီရင်နှုန်းနှင့် အပြစ်ဒဏ်များကို သုံးသပ်ချက်ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။
အစိုးရနှင့် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်၊ လုပ်ဆောင်ပုံတို့ကို ဝေဖန်မှုများအတွက် ပုဒ်မ ၆၆(ဃ) အသုံးပြု တိုင်ကြားခြင်း ကိုရပ်တန့်ပါ။ ထိုသို့ ပုဒ်မ ၆၆(ဃ) အသုံးပြု တိုင်ကြားခြင်း ကိုရပ်တန့်ရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းအတွင်း စည်းမျဉ်းထုတ်ပြန် ပြဌာန်းသင့်ပါသည်။
ပုဒ်မ ၆၆(ဃ) အား အပြီးတိုင်ပယ်ဖျက်ခြင်းကို တိုက်တွန်းရန်အတွက် ယခုအစီရင်ခံစာပါ သက်သေအထောက်အထားများကို အသုံးပြုပါ။
ပုဒ်မ ၆၆(ဃ) တိုင်ကြားချက်များကို လေ့လာစောင့်ကြည့်ပြီး၊ ဂျာနယ်လစ်များကို တရားခံအဖြစ် စွဲဆိုတိုင်ကြားသည့်အခါ အများပြည်သူသို့ သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါ။ ထို့အပြင် အသရေဖျက်ခြင်း နှင့် အကြိုက်မဆောင်သည့် အမြင်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရာတွင် ခုခံပေးရမည့် ရှေ့နေအား ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဆင့် သုံးသပ်ချက်အမြင်များ ထောက်ပံ့ပေးသင့်သည်။
ပုဒ်မ ၆၆(ဃ) အား အပြီးတိုင်ပယ်ဖျက်ခြင်းကို တိုက်တွန်းရန် အတွက် ယခုအစီရင်ခံစာပါ သက်သေအထောက်အထားများကို အသုံးပြုပါ။
ပုဒ်မ ၆၆(ဃ) အသုံးပြု တိုင်ကြားခြင်းများကို ရပ်တန့်ပါ။ ဆက်လက်အသုံးပြုနေခြင်းက ပုဒ်မ ၆၆(ဃ) ကို အားပေးနေခြင်း၊ အကာကွယ်ပေးနေခြင်း နှင့် ပိုမိုစစ်မှန်ဘောင်ဝင်အောင် ပြုလုပ်နေခြင်းမျိုး ဖြစ်နေသည်။
အသရေဖျက်ခြင်းကဲ့သို့သော လွတ်လပ်စွာရေးသားထုတ်ဖော် ပြောဆိုခြင်းကို ကန့်သတ်နေသည့် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ နှင့် စည်းမျဉ်းများ အကြောင်း ဂျာနယ်လစ်များနှင့် အယ်ဒီတာများအား လေ့ကျင့်သင်ကြားထားပေးသင့်သည်။
ဆောင်းပါးနှင့် ဖော်ပြချက် ဇာတ်လမ်းများသည် အသရေဖျက်မှုမြောက်လာနိုင်သလား၊ သို့မဟုတ် အကြိုက်မဆောင်သည့် အမြင်အပေါ် သည်းမခံနိုင်ခြင်း ဖြစ်လာနိုင်သလား ဆိုသည်ကို ခွဲခြားနိုင်ရန် ပုဒ်မ ၆၆(ဃ) တိုင်ကြားမှုများကို ဆန်းစစ်လေ့လာပါ။
ပုဒ်မ ၆၆(ဃ) အား အပြီးတိုင်ပယ်ဖျက်ခြင်းကို တိုက်တွန်းနှိုးဆော်သည့် စီမံကိန်းများအား အထောက်အပံ့ပေးသင့်သည်။
(လွှတ်တော်အမတ်များအပါအဝင်) ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများ နှင့် (ပညာရေးသင်ရိုး နှင့် ပြည်သူ့သတင်းအချက်အလက် ကန်မ်ပိန်းများမှတဆင့်) လူထုအား ဒစ်ဂျစ်တယ်စာတတ်မြောက်ရေးနှင့် မတူကွဲပြားမှုများအပေါ် သည်းခံစွမ်းရည်တိုးမြှင့်ရန် ပြုလုပ်သည့် စီမံကိန်းများအား အထောက်အပံ့ပေးသင့်သည်။
Tagged with: 66(d) ၆၆(ဃ), Defamation အသရေဖျက်မှု, Digital rights, Human rights defenders, Penal code ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ, Telecommunications Law ဆက်သွယ်ရေးပုဒ်မ, Whistleblowers